Ego ole ka ndị na-agba ịnyịnya ígwè nke Tour de France dị arọ? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Ogologo ịdị arọ nke njem de france cyclist - mkpebi ndị bara uru
Ogologo ịdị arọ nke njem de france cyclist - mkpebi ndị bara uru
Ego ole ka ndị na-agba ịnyịnya ígwè nke Tour de France dị arọ?
Taa, anyịnya igwetụọna na dị nnọọ n'okpuru 15 pound-ma ọ bụghị ihe ọ bụla ala, ebe ọ bụ na nke kacha nta bike nke UCIibu ibubụ 6.8kg, nke sụgharịrị ka ọ bụrụ 14.99 pound.24.07.2020
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọkachamara na-agba ịnyịnya ígwè chọrọ ka igwe kwụ otu ebe ha ruru ịdị arọ nke UCI nke kilogram 6.8, ọkachasị ma ọ bụrụ na ụdị ihe ahụ dị n'ihu ha n'ịgba ọsọ. Jebel Hafeet ebe a na njem nlegharị anya nke UAE.
N’ihi ya, m ga-ajụ gị obere oge tupu i bido n’ọkwa a ego ole igwe gị ji agba. Bịa - asaa - asaa, tụlee asaa? - A na m atụ ụjọ - ụjọ na-atụkwa gị! - Olileanya na-erughị ndị ọzọ ọgba tum tum, ma n'elu ịgba. - 7.38. (Ìhè nkà na ụzụ) - Ọ dị mma, Adam, emebeghị m ka akpịrịkpa ahụ pụta, ana m ekwe gị nkwa nke ahụ.
Imaara oke igwe igwe gi? - Eeh. - N'etiti kilogram asaa na asatọ. (Ha na-achị ọchị) Echere m na Machị 7th - Ka anyị pụọ. (soft Techno music) Gwa onwe gi ihe, 7.15th - mega, mate. - 7.15th, ị nwere obi ụtọ na nke ahụ, ọ bụghị gị? - Nke ahụ dị mma, innit? - Ee.- Ga-arịgo taa.- Ee, ọ bụ eziokwu, ejiri m ntụkwasị obi mejupụta gị.
Onweghi ihe na - erughi mmeri taa - enyi na - agba oso ọ na - arị elu, ị na - ara? - Gaa n'ihu, gaa n'ihu na nke a - Ya mere site na 50s echere m na ọ karịrị 6.8 na 1/2 - Ọ dị mma. - Mana m ejighi n'aka banyere ngwaọrụ Velon. - Ehee.
Na onye ntụgharị. Anyi aga tụọ ya? - Anyị kwesịrị. - Ee, anyị ga-atụ ya.
Naanị m tụọ otu n'ime ndị otu gị, m mere ka ụbọchị ya dị ụtọ. Ọ dị mfe karịa ka o chere. Nri.
Mechara? - Kedu ihe bụ ihe ahụ? - 6.8.- 6.8 na - Na ihe niile! Na ihe niile! - Ee nwa! (ma ọchị) Kpọmkwem. - know ma ego igwe gị ole ji? - 6/8 - Ee, anyi kwesiri inyocha ya? - Ee, gaa n'ihu. - Bịanụ, ka anyị lee ya anya - you tụkwasịghị m obi? (Ha abụọ chịrị ọchị) M Kwesịrị ijide igwe okwu? - Ee, ị jidere nke ahụ.
Jidere ya. Nke ziri ezi, ka anyị tụlee ya. (egwu Techno obi ụtọ) - Ah.
Echere m na 9/6. Igha ụgha. - Nke ahụ mara mma. - Ọ dịghị njọ. - O nwere ike ịbụ, m na-eche ma ọ bụrụ na gị na-arụzi ụgbọala kwukwara ihe ụma ebe m dị nnọọ ntukwasi ya na ọ bụ obere. - Ọ bụ? - Ee, 6/8 - Nwere ike? Na-eweta ikuku dị elu karịa na taya - ee, ebe ahụ ka anyị nọ - ikuku dị na taya.
Amamiihe. Ọ nwekwara diski brek. Na usoro 12 - ee? - Ee, Alex, gịnị ka igwe kwụ otu ebe gị? - Olileanya obere karịa ndị ọzọ anyịnya igwe.
Ma na njedebe. - Ee. - Isi ihe asaa. - More akọwapụtara ma ọ bụ? - asaa isi ihe ụfọdụ kpọmkwem karịa asaa isi ihe. - Kedu ihe bụ nke ahụ? - 7.38. - Gram 500 agbaala.
Nri, Marco, i nwere Alex a Fai. nyere r a bit nke emegbu ya na igwe kwụ otu ebe n'ihi na ọ maghị ibu ahụ. Ọ nwere igwe kwụ otu ebe dị iche, ọ bụghị ya? O nwere ihe kasịnụ.
Have nwere akụ - ee. - Kedu ihe ị chere di gị ji arọ? - Kwesịrị ịdị elu karịa nke ya. - Ee - ka anyi kwuo gram 200. - Ihe dị ka gram 200 ọzọ, ebee ka ọ dị, 6.3? Ọ bụ? - 6.3.7.38 - Nke ahụ bụ ya, ee, ọ bụghị 6.3. - Ya mere ọ dị asaa na ọkara? - Ee.
Ọfọn, ka anyị nwalee ya. Na-enwe obi ụtọ na nke ahụ, echere m. - Nke ahụ na-akpali mmụọ. - Ee. - Nke ahụ na-akpali mmụọ.
Ahụghị nke a na-abịa. - Gwa ndị na-ege ntị. Gịnị ka ọ na-arọ? - 7.34 - 7.34, na ọ bụ wiilị agba. - Ka a pụọ. - N’aka nri, m hụrụ ka ị dara, ọ dị mma, enwere akpịrịkpa, mana ị maara ole igwe gị ji arọ? - Echere m na 7/8 - Ee, 7/8? - Eeh, ị nwere ike ịnwale - Ka anyị nwaa, bia ebe ọ bụ? - Na igwe kwụ otu ebe, mba, nke a karịrị ebe a. - Ziri ezi.
Ka anyị leba anya. - Ọ bụ akụ. - Ọ bụ akụ.
Nwere onye ntụgharị na ya. Wee Garmin gị lelee ya.7.85, nwee obi ụtọ na ya? - Ee, 7,8, 7,9 dika m kwuru. - Ee kpọmkwem.
Nke ahụ abụghị eziokwu. (Reinardt na-achị ọchị) Na etiti, zuru oke.- Ee.- Ọ maara ụzọ ya gburugburu.- Ọfọn, na nnukwu Garmin, Igbe Velon na, M ga-asị 7.4? - 7.4? Ka anyi nwalee Nnukwu omimi miri emi.- Ee.- Ka anyị lelee anya mara na ọ dị mma ma zie ezi. 7.6.- Ala.- Ee.- Ọ bụrụ na m rie otu banana pere mpe ọ ga-abụ otu. (Uwe) - Ana m atụ ụjọ - ụjọ na-atụkwa gị! New bike afọ a, ọ bụghị ya? - Eeh. - Ka anyị tụọ anyị, dịkwa mma? - Ee.- you na-akọ nkọ ma ọ bụ na ọ bụghị? Have nwere maa? - Otu asaa.- 7.1, dịkwa mma.- Na, ee ee na Sigma. - Ah ee, ya na Sigma na Velon. - Asaa abụọ. - Ọ dị mma, ka anyị lee anya.
Ekwesịrị m ịtọgharịa ya. Ọ DỊ MMA. (obi ụtọ Tekno music) Agam agwa gi, aga m abu onye kacha amasị gi taa. 7.1.- Ee, ọ dịghị mma.- Ah, ọ mara ezigbo mma.
Maka na nke ahụ bụ gram 200, nke a nwere ike bụrụ ihe 50, ị pụtara 60? - Mba, obughi kwa - E, ya mere anyi no, 7.1. - Asaa! - Asaa? Asaa na ntụpọ? - Ee - dịkwa mma, Nke ahụ dị na anyanwụ nwa oge, dịka m.
Ma. (soft technology dị nro) 6,98. (Beep) Ọ bụrụ na ị nwere ike ịhọrọ nọmba lọtrị, aga m akpọ gị maka na ị nwetara ya nke ọma. - Eeh. - Naanị gram 20 apụ .- Ọ dị mma, ọ dị mma.- Nke ahụ ọ bụ ezigbo innit? - Ee.- you nwere obi ụtọ? - Eeh. - Ezi.- Ee, abụ m.- Kpachara anya na nke ahụ. (ọchị) - David! - Ikekwe-chere, chere, wepụ ya dị ka nke ahụ. -Ee, ka anyị lee anya - (na-asụ asụsụ mba ọzọ) - Oh wow, ee, 6.91.- Ọ dị mma, ugbu a, ị ga-atụle nke m! (ọchị) - Larry, ego ole ka igwe kwụ otu ebe gị ga-ebu? - Ọ dị mma, naanị m hụrụ nke ya, yabụ ugbu a, m na-eche na nke m ga-abụ 6.93. - 6.93, okay, ka anyi nwaa.
Nri, kedu ihe ị chere na ọ bụ? - Ekwuru m 6.93.- 6.91.- Damn, okay.- Lee nke ahụ.- M pụtara, m hụrụ nke ya, ahụrụ m nke ya. - isii iteghete otu. 7/13 - Ọ dị mma. (upbeat Techno Music) - Nke ahụ emebiela otu ahụ ugbu a.
Ya mere, anyị nọ! Offọdụ n'ime igwe igwe igwe igwe buru ibu na World Tour, enwere m obi uto nke ahụ n'ihi na Ọfọn, ọ fọrọ nke nta ka m nwee esemokwu n'etiti Alex Dowsett na Marco Haller. Ma ugbu a, AG2R La Mondiale ha nọ na-emekpa ahụ nke pụtara na m ga-akwụsị ebe ahụ tupu ihe apụọ aka karịa n'ihi na ọ malitere inwe obere mkpọtụ Ibu igwe kwụ otu ebe gị? Mee ka m mara na ngalaba nke dị n'okpuru. Chefuo ya achoghi akwukwo a ma soro ndi enyi gi kerita ya. nye m nnukwu aka ukwu. echefula ile ụlọ ahịa GCN anya na .globalcyclingnetwork.com. na ugbu a, maka edemede ukwu abụọ ọzọ, kedụ maka ọ bụrụ na ị pịa ala ebe a naanị ebe a?
Gịnị bụ nkezi nke ibu nke onye na-agba ịnyịnya ígwè?
Nri dị ezigbo mkpa nye ndị ịgba ịnyịnya ígwè ọkachamara na enweghị ike ịlele anya. Ọ bụ ya mere ndị otu egwuregwu ụwa ji etinye nnukwu ego na nri. Niile ga-enwe ma ọ dịkarịa ala otu onye siri nri na ndị otu yana otu onye na-edozi ahụ.
O doro anya ihe onye siri nri na-eme, mana gịnị banyere onye na-edozi ahụ? Agam a, achoputara m site na ime ka odi ka onye okacha mgba ozo ma juo Nigel Mitchell, onye bu Nutritionistat Team EF Education na onye enyi GCN maka ide akwukwo anyi, The Plant-Based Cyclist. Doorknobs) (Nnukwu Bass) (whoosh) Echere m na echetụbeghị m ụjọ na m ga-aga ụlọ ọrụ GCN. Na na na, Nigel? - Hiya Si, Anụrụ m nke ahụ.
Kwesighi ịtụ ụjọ ma ọlị, ị kwesịrị ịma na ịmara m ogologo oge.- Ọ bụ eziokwu, nke ahụ bụ eziokwu. Mana akpịrịkpa anaghị agha ụgha ma echere m na nke ahụ ga-abụ akụkụ nke ahụ.- Ma ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na ị na-ekwu ya n'ihi na isi gị dị ka onye na-eme egwuregwu na-ebu ibu? - Eeh. - N’agbanyeghi na m lekwasịrị anya dika onye na-edozi ahụ, sara mbara.
Ihe m na-elekwasị anya bụ na ahụike na arụmọrụ gị niile, ịdị arọ bụ naanị obere akụkụ nke ahụ. - Aka nri, nke ahụ na-atọ ụtọ n’ihi na ọ bụ ajụjụ mbụ m. Kedu ihe onye na-edozi ahụ na-eme maka ndị otu World Tour? - Ọfọn, nke ahụ bụ ajụjụ ọtụtụ mmadụ ga-achọ azịza ya. (ọchị) Mba, nke dị oke egwu, ọ na - agwụ ike ma dịkwa omimi, ọ na - arụkwa ọtụtụ ọkwa dị iche iche.
Yabụ enwere usoro ọkwa ebe anyị na-agba mbọ ịzụlite ezigbo ọdịbendị gbasara nri na nri na ahụike na arụmọrụ. Nke ahụ gụnyere ịrụ ọrụ na osi nri, iso ụlọ oriri na nkwari akụ, ndị ọbịa, na iso ndị mmekọ na-edozi ahụ na-arụ ọrụ. Echere m na ọ bụrụ na ị nwere gburugburu ebe obibi na ọdịbendị kwesịrị ekwesị, mgbe ahụ ndị ọkwọ ụgbọala na-amụta ihe site na ahụmịhe ahụ na nke ahụ nwere nnukwu mmetụta na otu ha si eri na omume.
Otu akụkụ nke ọrụ m bụ na mụ na ndị ọkwọ ụgbọ ala na-enwe nzukọ mgbe niile, ọkachasị n'ogige ọzụzụ. Ma mgbe onye ọkwọ ụgbọ ala ọhụrụ sonyere ndị otu ahụ, ana m eme obere okwu na ha, nke na-abụkarị ikpe na-ewe n'etiti elekere abụọ na abụọ, yabụ ọ mara mma. - Ee! - Ma ihe m ga-anwale, enwere ịnwale ma ghọta, ị nwere anagide nri ọ bụla? ị nwere mmasị ọ bụla? have nwere akụkọ ihe mere eme ọ bụla gbasara ahụike metụtara nri? Kedu ka ụkọ iron, ụkọ vitamin? D, ihe ndị dị ka nke a, ya mere, anyị nwere ike ile ụfọdụ ọbara akụkọ ihe mere eme, ihe ha nwere ebe ahụ, na otu nri na nri ga-esi mee nke a.
tour de france anyịnya igwe
You nwere nsogbu na ụfọdụ nri? Gwa ha gbasara amamihe na otu, eh? anyị na nri. Aga m ekwu okwu banyere otu ịtụnanya otu onye siri nri si dị na otu o siri chọọ ka ya na onye isi nri a nwee nkwukọrịta gbasara nri ọ na-enye na agbụrụ anyị sitere na etu esi arụ - Ọ dị mma. Yabụ, ka anyị aga n'ihu wee lelee ahụ mmadụ anya? - Ọfọn, na-akpali mmasị Si, ihe m mere, m gwuru m ndetu gị site na 2005 mgbe ị bụ ugwu biker.
Ya mere, anyị nwere ụfọdụ akụkọ ihe mere eme ka anyị wee hụ n'ezie otu ị gbanwere n'ime afọ 15 gara aga - ee, yabụ taa anyị agaghị achọpụta naanị ihe onye na-ahụ maka nri na-eme njem ụwa na-eme, kamakwa chọpụta etu m siri mee na afọ 15 gara aga ajụla afọ.- Yabụ ị ga-agbada na uwe ogologo ọkpa gị.- Ọfọn, ọ bụ ụbọchị obi ụtọ gị, ọ bụghị ya? (ọchị) (mgbịrịgba na-ada ụda) Ọfọn, dịka ọ ga - abụ ihe na - atọ ụtọ ịgụ ọgụgụ ahụ, nọ ọdụ ebe a na uwe ogologo ọkpa m, achọtara m obere mgbatị mgbatị ahụ m chere na Nigel nwere ike ịbụ na 2005 - Ee, echere m na ị nwere ike lelee ejiji.
Ihe ozo bu na amataghi m gi na enweghi okpu GCN gi, i nwere uwe elu - enwere m, edekwara ya GCN na ya, echere m na aghaghi iwepu ya, nri? - Ee, yabụ isi, ihe anyị na-eme? Nke a bụ, aga m ewere ihe ụfọdụ na ahụ gị, anyị ga-atụkwa ntụpọ asatọ na ahụ gị na ihe anyị na-eme bụ, anyị na-ele ngụkọta, anyị anaghị arụ ọrụ a abụba akụkụ. ma ọ bụ ihe yiri ya, ọ bụ ezie na a na-ejikarị ndị mmadụ eme nke ahụ. Achọghị m iji ya n'ihi na ị ga-eji ụfọdụ akara ndọghachi azụ ma ọ bụrụ na ịnweghị iji otu ihe nhọta, ị ga-enweta nọmba dị iche iche.
Ma enwere ọtụtụ ihe na ya, ọ bụrụ na anyị nwere ngụkọta, anyị anaghị ekwu na ọ dị mma ma ọ bụ dị njọ, anyị na-ekwu na ị nọ ebe a. Ihe anyị na-eme n’ime oge bụ na anyị nwere ike nyochaa nke ahụ, yabụ, ị maara, anyị nwere ike ileba anya ebe onye na-eme egwuregwu nọ n’ọnọdụ dị iche iche nke oge. Mgbe ụfọdụ anyị na-arụ ọrụ na ebumnuche maka ndị chọrọ otu ibu.
Mana ọ bụ ihe dị ka ichebe onye na-agba ya dịka ihe gbasara ịmezu ebumnuche arụmọrụ n'ihi na ọ dị mfe iburu ibu oke ma ọ bụrụ na anyị buru oke ibu anyị nwere ahụike na arụmọrụ otu onye ọkwọ ụgbọ ala - Ọ dị mma - yabụ ọ bụrụ na anyị ịchọrọ ibido, biko yipụ uwe elu gị bilie - Ọ dị mma, Woohoo! (Wolf whistles) - Ọfọn, ihe mbụ na mbụ, anyị ga-atụle gị.- Ọ dị mma.- Ya mere guzoro na akpịrịkpa.- Chei! - 72.1.- Ee! - Ọfọn, na-akpali mmasị, ị bụ August 8th 2005 70.9.- Nke ahụ nwere ike ịbụ biceps m, echere m, nke toro kemgbe ahụ. (ịchị ọchị) Enwere m ike ijide ihe ọ bụla, Nigel, mana echere m na a gaghị arafu gị. - Mba, achọrọ m ka izuike gị.
Ya mere, ihe niile anyị ga-eme ebe a bụ m na-eji ụzọ caliper a, ya mere, nke a bụ ngwaọrụ nke sayensị nwere oke ego na ábụbà nke na-etinye nrụgide ụfọdụ na akpụkpọ ahụ. Ihe niile anyị na-eme bụ naanị ịlele na milimita, gosipụta ọtụtụ akpụkpọ ahụ na anụ ahụ na-akpata anyị nwere ebe ahụ mgbe niile, ọkpụrụkpụ nke akpụkpọ ahụ na-anọkarị, ọ bụ ihe dị n'okpuru na-agbanwe ma ọ bụ ihe dị n'okpuru, nke na-anọchite anya ahụ abụba. Dịkwa ka m kwuru na mbụ, agaghị m eji nke a chọpụta n'ezie oke abụba mmadụ yi n'ihi na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịme ya, mana ihe ọ bara uru bụ inyere anyị aka ịkọwapụta mgbanwe mgbanwe nke onye na-agba ọsọ ka anyị wee nwee otu nwee ezi echiche banyere ị na-efufu akwara? anyị na abụba na abụba? na otu anyị si atụ nke ahụ ka oge na-aga iji kpuchido anyị onye na-agba ya.
Azụkwara m ka m mee akpụkpọ anụ n’okpuru ọgbakọ akpọrọ ISAK na mgbe ndị mmadụ attentionara ntị Iji wrinkle akpụkpọ, ha kwesiri ịjụ agụmakwụkwọ ndị mmadụ. Zọ m ga - esi mee gị nke a abụghị etu esi eme ya na ntuziaka ISAK na nke ahụ bụ naanị maka mkpamkpa.- Ọ dị mma - Ma ihe mbụ m ga - eme bụ na m ga - ele gị anya , na enwerem ebe nchekwa foto maka aru mmadu- oh nke ahu bara uru. (ochi) - Ya mere, ị naghị ele anya na ọ dị iche, laghachi na 2005, ime ihe n'eziokwu Si - Phew! - Y’oburu na m legidere gi ebe ahu anya, a ga m achoputa na ibidoro onye a noo na-agbasa obere n’azu, ebe akpo. (ịchị ọchị) - Ọ dị mma, dịkwa mma. - Ọ bụ ihe ọ bụla dị oke egwu, ọ nweghị ihe dị oke egwu, yabụ m na-anụkarị ya ebe a dịka onye mbụ GCN na-ekiri.
Afọ ahụ bụ ihe na-atọ ụtọ, Nigel, ị maara, ọkwọ ụgbọ ala dị ka Valverde, ị maara, n'ime afọ iri anọ ya, - Ee.- know mara, ọ ga-alụ ọgụ, amakwaara m na anyị enweghị ike ịbanye na nkọwa, mana ọ ga-abụ imegide ha Fightgbasa Gburugburu na Ages? Ndị egwuregwu kachasị elu? - M na-agwa gị, nke m hụrụ mara mma na-adọrọ mmasị, echeghị m na ọ bụ ihe siri ike karị n’ihi na mụ na ndị mmadụ rụkọrọ ọrụ n’ime ụzọ iri anọ ha, iri ise ha bụ eziokwu. Echere m na ọ bụ agbanwe agbanwe - ziri ezi. - Yabụ, echere m na ọ bụrụ na ndị mmadụ agbachitere dị ka Valverde ọ nwere ike isiri ya ike kwa afọ, ma ọ bụ na ọ ga-agbanwe ihe kwa afọ, mana n'ụzọ ụfọdụ ọ naghị ahapụ ya ka ọ gafere n'onwe ya, nwee pound 10, mgbe ahụ ọ nwaa imezi nke ahu.
Ya mere o weputara oge dum. Ya mere, echere m na ọ nwere ike ịbụ ihe ịma aka, mana echere m na ọ bụrụ na ndị mmadụ nọrọ otu a, ọ ga-adị mfe karị ịlụ ọgụ ọzọ. Yabụ ihe anyị na-eme bụ ịlele akụkụ aka nri dịka nke a, nke a bụ akụkụ ndabara anyị ga-atụle - dịkwa mma - Otu n'ime ihe ndị na-atọkarị ụtọ na ndị na-agba ịnyịnya bụ na mgbe anyị na-arụ ọrụ n'akụkụ, ọtụtụ mgbe, mgbe ha dara, ha nwere ọtụtụ anụ ahụ, ọ bụ ya mere anyị ga-eji gbalịa ịlele gburugburu anụ ahụ anụ ahụ n'ihi na nke ahụ na-aga ogologo oge na nke a, m na-ele anya etu otu ahụ si gbasaa, mana m hụkwara ma ọ bụrụ ị na-ama jijiji n'ihi na ọ bụrụ na ị dị ntakịrị shaky dị ka ọtụtụ ọkwọ ụgbọala na-ahụ m asị biko jide n'aka na ị na-aga na-enyocha chiro.
Ọfọn, anyị na-arụ ọrụ mara mma dị ka otu. Naanị m na-achọ isi etiti aka gị n'ebe ahụ, mgbe ahụ, anyị ga-agba gburugburu wee were nha ndị a ebe ahụ. - Ọ dị mma. - Yabụ, hapụ m ka m gaa ebe a.
Ndenye uche ngụkọta oge. Ọ dị mma, anyị kara aka gị aka maka ugbu a, m ga - ewere akpụkpọ ahụ, ihe m na - eme bụ na m ga - ewere nrịgo atọ dị iche iche ma na - ewerekarị nkezi. Ọzọkwa, n'okpuru usoro iwu kachasị sie ike, m ga-ede otu nha ọ bụla dị iche iche, mana maka oge mgbochi oge, m ga-ewere nke a wee tụọ ya.
Yabụ ihe m na-eme ebe a bụ ịdọpụ anụ ahụ n'aka gị, hapụ caliper na, hapụ ya ka ọ nọdụ ala, wepụ ya, mee otu ihe ahụ ọzọ, mee otu ihe ahụ ọzọ, nke ahụ dị mma. (Relaxing music) You nwere ike tinye uwe elu gị iji nọrọ na-ekpo ọkụ - ị nwere ike iku ume niile mgbe ahụ. (ọchị) - Mgbe ahụ anyị ga-eme ụkwụ gị, yabụ, ihe ị ga - eme bụ ịnọdụ ala n’oche ebe ahụ.
Ugbu a, afọ 15 gara aga, ị nweghị ụkwụ ntutu? - Mba, nke ahụ ziri ezi. Ọnwa atọ gara aga enweghị m ụkwụ dị ntutu isi, mana ọ bụ ihe oyi - ọ bụ ihe oyi, ọ bụ eziokwu? Ya mere, ihe niile m na-eme ebe a bụ na m si n’apata ụkwụ m ruo ikpere wee gaa ebe etiti ebe ahụ. Na nke ahụ na-enye anyị, ọ bụrụ na anyị emee ka girth ahụ dịkwuo elu, mgbe mmadụ na-eme ka girth dịkwuo elu ma akpụkpọ anụ ahụ na-ebelata, nke ahụ bụ ihe na-atụ aro n'ihi na ha na-ewunyekwu ahụ ike n'apata ụkwụ - - Ee.- Mgbe akpụkpọ ahụ gbagoro ma ụkwụ na-adị obere, nke ahụ pụtara na ha na-etinye abụba karịa ma daa akwara, nke abụghị ihe anyị chọrọ. - ee Ya mere ụdị nha ndị a nwere ike ị nyere onye ọkwọ ụgbọ ala ezigbo aka n'ihi na naanị ha na-enyere anyị aka ịghọta ụfọdụ mgbanwe na ha. - Ee, enwere m ike iche n’ezie na ọ bụ ntakịrị ihe nrịba ama nke ọzụzụ ọzụzụ, nri? - Ọ bụ, ee.
Echere m na ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala nwere mmasị n'ezie ma ọ bụrụ na, dị ka anyị na-eji nke a, ha nwere mmasị n'ezie ịnwe data a anakọtara na oge niile ka ha wee nwee ike nyochaa ma hụ ebe ha nọ na ọkwa dị iche iche yabụ mgbe m bụ ndị ọkwọ ụgbọala I ' Mụ na ya rụkọrọ ọrụ ọtụtụ afọ laghachi na-asị, 'Oh, ebee ka m nọrọ May gara aga, Nige?' Oh, oh ee, mgbe ahụ, m wee (beeps). 'Ma ọ bụ' Oh ee, achọrọ m n'ezie - 'Ya mere, ha na-eji ya dịka akụkụ nke matrik ha na ya - Ya mere, ị nwere ike ime nke ahụ n'ọsọ mgbe ahụ? - Ee, kpam kpam! Ya mere agbụrụ nwere ike ịbụ ezigbo ebe iji nakọta ụfọdụ data ahụ, mana ihe dị mkpa gbasara ya bụ na anyị anaghị eme ya, n'ụzọ ụfọdụ, n'ụzọ doro anya, n'ụzọ ụfọdụ, ịkpọ oku banyere ya. Ọ bụ na anyị dị mma, lee ya.
Anyị anaghị ekwu na nke a dị mma, nke a dị njọ, ihe ịga nke ọma ma ọ bụ ọdịda, anyị na-eji ya dịka ngwaọrụ nlekota. Mana achọpụtara m na ọ nwere ike ịbụ oke nchekwa iji gbochie ndị ọkwọ ụgbọala ịbụ ndị na-adịchaghị oke ma dịkwa gịrịgịrị - - Ee - Dịka na Grand Tour, anyị na-atụkarị ihe a na mbido, n'etiti, na njedebe. Ọzọkwa, ọ bụ n'ezie inyere anyị aka ịghọta nguzo ike, yabụ ndị na-agba ịnyịnya na-ahụ na anyị na-enweta calorie zuru oke ọzọ.
Anọla m n'ọsọ ebe ndị na-agba ịnyịnya ibu dara ngwa ngwa ka anyị nwee ike itinye aka iji nyere ha aka ịzụ nri ma mee nke ọma na izu ole na ole gara aga. Yabụ, ịmara, ọ bụ maka nkwado, ọ bụghị ikpe. - Eeh.
Enwere m inkling na akpụkpọ anụ ahụ agbagola ma akwara ahụ belatara. Ma m ga-abụ ezigbo mmasị. Ọ dị mma Nigel kedu ka anyị si ele anya? - Ọfọn gịnị ka ọ pụtara? Dị ka m kwuru, anaghị m ekwu ma ọ bụrụ na ihe dị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ, ọ bụ naanị oge anyị nọ.
Anyị nwere mmasị n'ihe anyị nwere ike ime, tụnyere nke a na data ị nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 15 gara aga. na-akpali mmasị na ọ dịghị oke ibu mgbanwe, ị bụ naanị a pound arọ, ma gịnị ka nke ahụ pụtara maka ahụ gị? Yabụ n'ụzọ ụfọdụ, ha nọ n'ime njehie mmesho, akụkụ, mana ihe na-atọ ụtọ bụ na akpụkpọ anụ agbagola nke ọma. Laa azụ na 2005, ngụkọta asaa dị na milimita 36, ​​ma taa, ha bụ millimita 53.4. - Ọ dị mma. - Gini bu ihe nke a putara? - Enwere m olile anya na abụghị m dị pasent 80 karịa m (ịchị ọchị) - Ọ dị ka m kwuru, anaghị m eme pasent anụ ahụ.
Mana ihe ọ pụtara bụ na n'ihi na ibu ahụ mara mma otu ihe ahụ, girth ahụ dị otu ihe ahụ, mana akwa akpụkpọ ahụ dị ntakịrị ntakịrị karịa nke ahụ pụtara n'ezie ihe ị mere bụ na ị furu efu akwara na ụfọdụ abụba ọ bụrụ na m lelee ọkwa ị rutere ebe a, n'ime otu ìgwè ị nwere ike ịchọta mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ na-agba ịnyịnya na Disemba ndị nwere ụdị akpụkpọ ahụ ruo ugbu a na Disemba, na mgbe ha banyere n'oge ịgba ọsọ ha ga-adị nnọọ ka nke gị. Yabụ n'eziokwu, ọ bụrụ na ịlele oge ahụ ugbu a, anyị na-eme nke a n'oge oyi, ma anyị mere ya tupu oge ọkọchị, ọ nwere ike bụrụ na ndị a laghachiri na 36 millimeters n'oge ọkọchị. - Ọ dị mma, yabụ, m nọ naanị ọnwa isii site n'ụdị dị elu. - Mana iji mee ihe n'eziokwu, ị maara, anyị anaghị ekwu maka ebe ndị a dị ugbu a, na nke a bụ ihe adịghị mma maka ahụike gị, ma ọ bụ maka onye ụdị ịnya ụgbọ ala, nke ị na-eme ga-emetụtakwa ịkwọ ụgbọala gị n'ụzọ na-adịghị mma.
Yabụ ị nọ na mpaghara dị mma. - Ọ dị mma, nke ahụ dị mma site na echiche nke onwe, n'ezie, mana ihe na-amasị m bụ n'ezie na ị gaghị ekpe onye ọkwọ ụgbọ ala ikpe mgbe ha batara, na usoro: Ọ dị mma, anyị ga-edozi gị ugbu a n'ihi na akpụkpọ gị folds dị elu karịa nke gị niile. - Mba, ikpe dị ka nke a nwere ike ịdị oke egwu ma ana m anwa igbochi ndị ọkwọ ụgbọala iji onwe ha atụnyere ndị ọkwọ ụgbọala ndị ọzọ.
Anaghị m achọ ime mkpebi ziri ezi ruo mgbe anyị nwere akara ụbọchị ma nwee ike ịhụ otu ndị egwuregwu si mee. Ọ bụrụ na anyị nwere onye ọkwọ ụgbọ ala nke na-abata na Disemba wee nwee nnukwu akpụkpọ ahụ, anyị ga-asị na anyị ga-agwa ya eziokwu zuru oke wee sị, lee, ị maara, maka oge nke afọ, kedu ebe nke ahụ dị, otu ị nọ n'oge? mgbe ahụ, ha na-agakarị, nke ọma, n'ezie a bụ m ọtụtụ di na nwunye ebe m kwesịrị ịnọ ma dịkwa mma, ka anyị nyere gị aka na nke ahụ, yabụ mgbe anyị ga-ezute ọzọ na Jenụwarị nke a bụ ihe ị ga-arụ ọrụ. Ọzọkwa, ọ bụ usoro nkwado, kama, ị maara, ị buru oke ibu, pụọ ma kpochapụ onwe gị.
Offọdụ n’ime ụzọ ndị a iji mee ka mmadụ tufuo obere ibu m nwere ike iche n’okpuru nlekọta dị nso ga-adị irè nke ukwuu, na ka emechara, ibu dị ezigbo mkpa nye onye ọkaibe na-agba ịnyịnya. Ma onye na-anya ụgbọ ala ga-anọrọ onwe ya ruo ọtụtụ akụkụ nke afọ ma lekọta onwe ya anya. M nwekwara ike were ya na ọ dị ezigbo mfe ọ bụghị naanị imehie ihe, kamakwa imehie ihe mgbe niile.
Ya mere, ọ bụ akụkụ nke ọrụ gị iji lekọta nri gị site na nke a? - Ee - Dịka ọmụmaatụ, nsogbu iri nri? - Ee, yabụ ọ bụrụ na anyị leba anya n’ịgba ịnyịnya, ọ bụghị naanị ịgba ịnyịnya ígwè, ị maara, enweela m ọtụtụ egwuregwu, nsogbu iri nri bụ ihe a na-ahụkarị n’ọtụtụ egwuregwu. Approachzọ m si eche echiche na echiche m metụtara nsogbu nri. Yabụ ọ bụrụ na ị chee echiche banyere ya, ihe anyị na-arịọ ndị na-eme egwuregwu ka ha mee abụghị nke nkịtị, yabụ na ị maara mgbe ndị mmadụ na-eme ihe dịka mgbatị ahụ ngwa ngwa, nri? Rungba ọsọ nke ike dị oke mma maka ogologo draịva adịchaghị mma, yabụ enwere nsogbu na ya.
Mana nke ahụ apụtaghị na ọ bụ ọrịa, ihe m na-ekwu na nke ahụ bụ, ọ bụrụ na site na mmetụta mmụọ ma ọ bụ nke ahụike, ọ bụ ihe na-adịghị mma maka onye na-eme egwuregwu. Yabụ ọ bụrụ na anyị ewebata mgbanwe na nri na ọzụzụ iji nyere ha aka imeziwanye arụmọrụ, mgbe ahụ, usoro a ezighi ezi anaghị adị njọ na ebumnuche mmetụta uche na-eme ka usoro nnupụisi ndị a na-enweghị ezigbo mgbagha site na arụmọrụ ma ọ bụ nke anụ ahụ, ọ bụrụ na anyị amalite ịbanye ebe dị ize ndụ mgbe ndị mmadụ na-abawanye n'ime nsogbu iri nri. Na site n'inye ndị na-eme egwuregwu nkwado ọzọ, ekwenyere m na anyị nwere ike igbochi nsogbu iri nri ịghara ịghọ nsogbu iri nri. (Doorcracks) - Ọfọn, m ga-ekele gị Nigel nke ukwuu, nke mbụ maka ime ka ọ dịrị m mfe, ejiri m n'aka na ọ ghaara ụgha banyere akpụkpọ anụ m, mana anyị ekwesịghị ịma na agbanyeghị, kamakwa n'ihi ya nghọta di egwu na ihe omuma dika mb ase nile.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ Nigel ọzọ, ma m n'aka na ị ga-ahụ, lelee otu akwụkwọ edemede nke anyị gbara ya, dabere na akwụkwọ Cyclist Plant-based. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ nke ị nwere ike pịa ihuenyo ahụ ugbu a, ma ọ bụghị biko nye isiokwu a nnukwu isi mkpịsị aka.
Kedu ihe dị mma maka ndị na-agba ịnyịnya?
Ọ dị mfe iche na ọ na-aga nke ọmaọkachamara ịgba ígwèHa niile dị obere obere ụmụ nwoke, ma ọ bụrụ na i lee data ahụ anya, ọ na-apụta na ha nwerenkezielu nke 1.80m na ​​otunkezi ibunke gburugburu 68kg.12.09.2019
Anyị na-ekwukarị banyere mkpa ọ dị ịdị arọ ike ka ị na-arịgo ugwu, mana kedụ ihe dị iche ọ na-eme mgbe ị tufuru akụkụ buru ibu nke ahụ gị? Abụ m Matt na m bịara Andorra na ezigbo ịrị elu ụwa, anyị ga-eme ụfọdụ ezigbo ike dị na ụwa dị iche iche, chere ma hụ ihe dị iche, ee enwere ezigbo GCN na-eme sayensị na ule anyị na-eme Anyị ga-eme 5 km nke a na nrigo na-agba ịnyịnya abụọ na-agba ọsọ nke ọ bụla na nke mbụ anyị ga-enwe akpa azu paaki 5 n'azụ anyị, anyị ga-eji ike a setịpụrụ gafere, yabụ m na-eji ihe dịka 275 watts gbagoo Dan na ọ ga-abụ abụọ anọ Drive ise watts wee gaa n'ihu na-edina ala a obere iji zuru ike, naghachi wee mee ọsọ ahụ ọzọ, mana oge a na-enweghị akpa, mana ya na otu ikike ahụ, ya bụ abụọ ruo ise na 275 iji hụ ihe dị iche, anyị Ha abụọ ga-eji Power-Tap-P1-Pedals nwere Power-Tap-Dual GPS tinyere isi iji tụọ wat wat my canyon Ultimatecomplete e with full bottle of Power Metercetera na-abịa na kilogram 8.1, akpa m na-atụle ise ise otu atọ na m, gụnyere akụrụngwa m niile, na-abịarute iri asaa na anọ na anọ na mkpokọta nke Meon Run otu n’ime iri asatọ na asaa poi nt isii ato ise mnya igwe tinyere karama igwefoto na mita ike ike na-ele asatọ na atọ na asatọ na ise akpa m na-atụle isi ihe ise maka m na akpụkpọ ụkwụ okpu m zuru oke iri asaa na ise na ise otu kilogram na-eme ngụkọta nke iri asatọ na asatọ na ise kilogram ise wee gbaa ọsọ ọnụọgụ abụọ anyị nwere ihe dị ka gram ise na akpa anyị dị iche iche na mbụ n'ihi na ọ ga-eji obere obere nche karịa anụ abụọ ruo ise cheta gbadata nwayọ ma ọ bụghị agbụrụ m na-achọ cheta okay mere ato abuo otu calabar oh dearokay so it's my run now ma oburu na igu m biko choro nick dika m na egbusi ya o bu the first time look at what it a bite chen warm my elapsed time 230 kedu 25:56 so that's run ọnụ ọgụgụ otu emechaala m ọsụsọ na-agba ọsụsọ dị ka ị bụ Dan gịnị bụ oge gị 25: 56 Emechara m na 230 watts agbalịrị m ijide abụọ na ise, mana mmasị kpakpando dị mma ugbu a, yabụ ọbụlagodi 3628, ọkachasị azu paaki a oh na m gbara mbọ ịnọ na abụọ ise na ise ka cadence dị obere mgbe m sonyere, oge m bụ 21 nkeji na 41 sekọnd na nkezi m bụ 278.
Ọfọn, tupu anyị eruo nkwubi okwu ọ bụla, enwere ihe abụọ na - egbochila anyị abụọ ịnwe ọsụsọ 500, yabụ ọnụọgụ nke ụmụ hydrated na-anọ kwa 278 watts vesos 230 48 ihe dị iche, anaghị ada ụda Echere m. ọ ka karịrị 20% mana ọdịiche nkeji anọ na LaVonwas dị adị n'ezie na m kwuru maka otu ihe ahụ dị ka nke gị, anyị abụghị ya mere na ọ dị ịtụnanya ole ọdịiche ọ na-eme hashtag wats? n'agbanyeghị nke ọma Matt na m ugbu a na-freshly hydrated ruo n'ókè ebe anyị ugbu a, otu ibu dị ka na mmalite nke Runone nke ahụ bụ kwa doro anya na-enweghị 5kg mmezi anyị efehe m n'ezie ịmata ihe ole dị iche ọ ga-eme ma mbụ m chere na ọ ga-ewe nkeji abụọ, oge nke a ị jidere m ngwa ngwa, gaa n'ihu na nkeji abụọ, ọ bụ eziokwu, anyị emechaa 3 2 1 ọ gafeela ọ were m ogologo oge ka nke ikpeazụ ka anyị chee echiche banyere ya , ọ bụghị agbụrụ mapokay nke ọma anyị ejirila awa abụọ gara aga na kọmputa ee ma anyị chere na anyị lebara nsonaazụ ahụ anya, mana tupu anyị erute ọnụọgụ ọnụọgụ, anyị ga-ahụ na anyị na-ama nke ọma na-eji oke arọ a na kwa ikike ndị a ka e wee nwee ụfọdụ n’ime unu nwere ike ime karịa 280 watts maka ụdị Eurasia a na ụfọdụ n’ime unu ndị na - enweghị ike, mana ụdị nyocha a adịghị abịa na ọtụtụ ọrụ ọkwọ ụgbọ mmiri oge niile. , ee na n'ihe metụtara kilogram ise ọ ga-ekwe omume ọtụtụ mmadụ iwelata , karịsịa mgbe ị na-ele m anya na m bụ n'ezie kilogram isii ma ọ bụ kilogram isii ma ọ bụ asaa karịa myRaceway ee, ọ fọrọ nke nta ka m hà nha anya dị ka vekilogram nke dị n'elu, ebe m na ụbọchị m na ule civello m welitere zuru ezu na ya, ee, iji nweta nsonaazụ m n'onwe m, yabụ nke mbụ m gbara ọsọ 25 nkeji na 56 sekọnd, nke abụọ m 24: 40, nke ahụ bụ nchekwa nke 1 nkeji na sekọnd 16, nke na-ada ụda otu? zuru ma ọ bụrụ na ichere otu nkeji n'akụkụ okporo ụzọ, mara mma ogologo na 16 sekọnd ka ị kwụghachi, nke ọma, ọdịiche dị na ọsọ m bụ 1 nkeji na 33 sekọnd, oge mbụ m gbara bụ 21 41 na nke abụọ m bụ 2008 m gara. ya onwe kwa, gini bu ihe di iche? ma ka na-echekwa oge, ee, asaghị m na emere m watt ọzọ na nke abụọ ma e jiri ya tụnyere nke mbụ ka ị nwere ike ịtụ anya tupu anyị amalite isiokwu a, tufuo ụfọdụ ibu site na ahụ gị, na-eme nnukwu ihe dị iche na na-agbago na nke ahụ bụ naanị ise? Kilomita na ọchịchọ nke ihe ruru. 7%, agbanyeghị ọ bụghị n'ụzọ niile anwansi ị mere ugbu a na naanị nkeji 20 karịa ma ọ bụrụ na ị chere na kilomita 150 na ụzọ egwuregwu, dịka ọmụmaatụ kilomita 50 Kli mbingit enweghị oke ọ bụ nchekwa nke ihe dịka otu ụzọ n'ụzọ anọ otu awa na nke ah? b? Chegodi itinye aka na FTP gị site na 230 watts ruo 280 na anyi mgbe ị na-efufu kilogram ise, mgbe ahụ echekwara gị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ minit ise na ịrịgo ahụ gbagoro site na azụ maka edemede maka otu esi emeziwanye FTP gị Kedụ ma ọ bụrụ na ị pịa ebe a. nwere isiokwu ọzọ dị mkpa ala ebe ahụ bụ Otu esi atụfu ibu site na ịgbago ịnyịnya na ịdenye aha na GCN pịa ụwa n'okpuru ebe ị na-atụ aka n'ihi na ọ gaghị ada ala ebe m na-egosi, echefula ịkekọrịta na-amasị isiokwu a kwa
Nye bụ onye kachasị ike na-agba ịnyịnya ígwè?
Ọchịchị nke isi mkpịsị aka akụkụ kwesịrị ekwesịibu ibuga-ewere 100 pound maka ụkwụ 5 mbụ nke ịdị elu (maka ụmụ nwanyị) na 106 pound (maka ụmụ nwoke). Mgbe ahụ, tinye 4-6 pound kwa inch nke ịdị elu karịa ntọala a (ụmụ nwanyị), na 5-7 pound kwa inch (ụmụ nwoke).05.09.2016
Anyị na-enweta ọtụtụ ndị mmadụ na-edetara anyị akwụkwọ na GCN yabụ ugbu a ha abanyela n'egwuregwu ahụ n'ụzọ ezi uche dị na ya ma enwere m ohere ịnweta ọkachamara n'ihi ya anyị chere na anyị ga-ajụ ngwa ọrụ ọkachamara ma ọ bụ taa ka ha dị afọ ole, mgbe ha malitere ịgba na otu ha siri mee nke oma na agba mbu ahu olee mgbe i mere mgbe mbu i gbara mbu m bu 11 kedu ihe si na ya pụta ya obu 92 o bu 11:30 m na - eduga m dara n ’ohia wee laghachue bia mbu echere m ọ dị afọ 9 gịnị? bụ ihe si na mbụ nnukwu ej bụ 7 afọ karịa mgbe e mesịrị mana usoro ahụ bụ akụkụ nke afọ m, echere m na gburugburu ebe obibi bụ naanị ihe ọchị ka ị chetara ọnọdụ ị gwụchara n'agbụrụ mbụ gị ee m meriri agbụrụ anyị chọrọ ya m Chọrọ ihe ọchị mana ịchọrọ m Achọrọ m ụbọchị atọ n'usoro ma nke ahụ bụ ihe m kpọrọ ihe ịma aka m chere 15 14 ma ọ bụ 15 Ọ dịghị ka agbụrụ agbụrụ ọ bụla naanị otu agbụrụ Anyị nwere nọmba na azụ gị enwere m nọmba n'azụ m ee yeah ee ee ihe bụ ihe kpatara na m nọ ebe ahụ echere m 13 Ma kedu ihe si n'aka Ikein Sieger echetara m n'ihi na m dị obere karịa ugbu a mana abalị mbụ bụ 10 afọ gara aga yabụ otu usoro ahụ, ị mara na nna m bụ ọgụ ugwu maka pro na nke ọma na amalitere m ịgba ịnyịnya ugwu mgbe m nwere ike ịbụ 12 13 afọ na 16 17 m gara Isis Adam, afọ ole ka ị dị mgbe ị mere nke ahụ nwetara ya na nke mbụ m chere na m dị manchester ise na mpụga velodrome na-adọba ụgbọala na-agbagharị ma na-agagharị na ben 'Ebe gbagọrọ agbagọ ọ bụ ebe mbụ m nọ ebe a na mallorca 2005 na afọ ole ka ị dị afọ iri abụọ na 2005 20 agbụrụ m mbụ n'ezie m meriri agbụrụ mbụ na obodo m mbụ 90 90 90 90 afọ ole ị dị mgbe ahụ quanto anna nwere tent dị afọ iri na ole ị dị mgbe ị na-ewere mmiri mbụ ị na-asa n'èzí mgbe m bụ 13 na 28 nkeji na otu Nke abụọ ebe nke ahụ mere ka ị banye n'ụdị Excuse me, ọ bụ naanị m bụ nwatakịrị m chọrọ na mbụ , ee, mana o nwere ike ikwu na 15 yeah? rsold there amalitere m umengwụ mara ma e were ya tunyere ndi ozo, gini mere gi? Echere m na Vandana anyị meriri, ee e, agbapụrụ m afọ ole ị dị mgbe ị gbara ọsọ mbụ gị 18 Echere m na ọ masịrị m gịnị si na ya pụta? Adị m isii na ọsọ 60-kilomita na akpụkpọ ụkwụ na-agba ọsọ nkịtị na m na-ejide azụ nke mydads na m si n'ụlọ nchekwa ahụ dị afọ asaa dị afọ asaa na-enweghị njedebe nke abụọ n'okporo ámá n'okporo ámá n'okporo ámá n'okporo ámá nke mbụ na egwu m chere na ọ bụ ihe dịka 12 13 yeah a bit later Kenny and houseyoung m nọ na bmx na trackbar na track track m na-eche na m bụ midfield ladyfish afọ ole ị dị mgbe ị mere agbụrụ mbụ m bụ dị afọ 15 ma gịnị si na ya pụta nke ọma anaghị m echeta kemgbe m chọpụtara nrụgide a ruo ugbu a? Ọ bụghị afọ ole ị dị mgbe ị mere agbụrụ mbụ gị dị afọ isii dị afọ isii na gịnị si na nke atọ nke Kyle pụta nke atọ ikpeazụ Ee afọ ole ka ị dị mgbe ị mere agbụrụ mbụ gị oh echere m na m bụ 16 ma ybe 15 m bụ n'ezie 15 n'ihi na mana m banyere otu na-ezighi ezi nke mere na amaghị m banyere ọgbọ egwuregwu niile, ee ee m bụ 15, echere m na ọ bụ ihe si na ya pụta na achọtara m ihu maka agbụrụ niile na-eche na m na-aga merie na mgbe ikpe azu maka onye obula m gabigara onwe m ma echere m na nke a di ka udi olili ozu maka uru di na ajuju abuo banyere mgbe ha malitere igba oso inwe. Yabụ mgbe ị ruru 89-20 ị ga - ebido site na ihe, adala mba n'ihi na ị ka nwere ike iburu ya na ọkwa ọkachamara ma ọ bụrụ na ịdenyeghị aha gcn biko pịa ụwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịjụ uru ahụ ya n'okpuru ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ nke dị iche iche anyị nwere ebe a anyị na-ajụ ha ihe kachasị mma na ihe kachasị njọ ka ọ bụrụ pro ịgba ígwè. Anyi nwekwara ebe edetu nke nyere ndi n’eto eto n’agbala mbo nyere ndi mmadu
Gịnị mere ndị na-agba ịnyịnya ígwè ji nwee anụ?
N'otu oge, ntachi obindị na-agba ígwèga-agba oke abụba. Naanị ihe fọdụrụ bụ uru ahụ.Yabụha dịtaa, ma egwuregwu. Ahụ dị elu anaghị etokarị karịa ahụ dị ala,Ọzọkwa.
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-ebi ogologo ndụ?
Ọtụtụ njikọ njikọ nyochaịgba ígwènatoro ogologoafọ ndụ, ma ọ ka bụ ihe omimi na US. Nnyocha ọzọ nke Britain chọpụtara nandị na-agba ígwèbụ 15% na-erughị ala ịnwụ n'ihi ihe ọ bụla. Nnyocha ọmụmụ Danish chọpụtara na ịkwọ ịnyịnya ígwè mgbe niile nwere ike belata ihe ize ndụ nke nkụchi obi site na opekata mpe 11%.Jenụwarị 29. 2020bọchị 2020
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè ha dị obere?
Ndị na-agba ịnyịnya ígwèmara amara na ahụ siri ike ha nwere na akwara ụkwụ dị egwu, mana ọtụtụ mgbe, mmepe ahụ ike nke ahụ ha dị elu na-agbada. Imirikiti okporo ụzọndị na-agba ígwènwee igbe dị larịị namkpa, warara azụ.
Kedu otu ndị ịgba ịnyịnya ígwè bu na Tour de France?
Kemgbe 1990, nkezi ndị ịgba ịnyịnya ígwè niile na Tour de France belatara, n'agbanyeghị na o yiri ka ọ dị larịị n'ime afọ 10 gara aga. Enweela ọdịda na nkezi nke ihe dịka 5 n'arọ (11lbs) n'oge ahụ, na-enweghị ọdịiche dị ịrịba ama n'ịdị elu - nke ga-egosi na ndị na-agba ịnyịnya na-ebuwanye ibu.
Ego ole ka ndị na-agba ịnyịnya Tour de France na-atụfu?
Ma ọ bụ ọ bụrụ na nke ihe mberede, kacha ibu ọnwụ ga-0.5kg, ”Van der Stelt na-akọwa. Ọ bụ ezie na calorie ọkụ na oriri ga-adịgasị iche n'etiti ndị mmadụ n'otu n'otu, ọ na-ekwu na ndị na-agba ịnyịnya ahụ na-eji ihe ruru calorie 8,000 kwa ụbọchị - 'na-ewere 10 pasent mgbakwunye kwa ụbọchị, ọ bụrụ na ọ bụrụ,' nke nwere ike ịkpata ụfọdụ ibu ibu.
Ebee ka okpokoro ibu dị na Tour de France?
Imirikiti ịdị elu na ịdị arọ dị na tebụl sitere na peeji Wikipedia maka onye ọ bụla na-agba ịnyịnya, ọ bụ ezie na ha kwenyere na ha pere mpe, ha nwere ike ọ gaghị egosipụta ezi ọduọ ịgba ọsọ nke ndị na-agba ịnyịnya ígwè n'oge njem ahụ.